အတိတ်နိမိတ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Drama, Essays.. » အတိတ်နိမိတ်	18
Posted by uncle gyi on Mar 27, 2015 in Drama, Essays.. | 18 comments
naywoon ni says: အခု​ကော မန္တ​လေးမှာ ဘာသီချင်း​တွေဖွင့်​လို့ ဆိုင်​ကယ်​​တွေခဏခဏ တိုက်​​နေကြတာလဲဟင်​ ။
Ma Ma says: မယုံဘူးလို့လည်း မဆိုချင်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂နှစ်လောက်က ရွှေတိဂုံဘုရားမှာ လင်းတကြီးတွေနားတာ။
ခုတော့လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ အမျိုးမျိုးဂုဏ်းတွေကွဲ၊
လူ့လောကအရေးတွေမှာ ၀ိနည်းနဲ့ ညီသည် မညီသည်မသိ (ကိုယ်ကမသိတာပြောတာ) ၀င်ပါ၊ ဥပဒေတွေထုတ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14410
kai says: လူတွေဘာသာရေးလုပ်လွန်းရင်.. အဲလိုပြသနာတွေဖြစ်တာပါပဲ…
ငြိမ်းချမ်းပါတယ်..တွင်တွင်ဟစ်လျှက်.. မငြိမ်းချမ်းဆုံးသော.. သူ…။
အနိစ္စ.. ဒုက္ခ..အနတ္တ… တောထွက်ဦးမှ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3713
လုံမလေးမွန်မွန် says: နိမိတ်တွေကို မယုံဘူးလို့ ဘယ်လိုပဲ ပြောပေမယ့် ငယ်ငယ်ကတည်းက နိမိတ်တွေကို ခေါင်းထဲရိုက်သွင်းခံခဲ့ရတာဆိုတော့ လုံးဝတော့ မကင်းနိုင်သေးဘူးရယ်…. တတ်နိုင်သလောက်တော့ ဥပါဒါန်မဖြစ်အောင် နေပါတယ်… ဒါပေမယ့် လူကြီးတွေနဲ့ကျတော့ ယှဉ်ပြီး ပြောလို့ မရပြန်ဘူးလေ..
လောလောဆယ် နောက်လ ၂ ရက်နေ့အိမ်ပြောင်းဖို့ကို ပြဿဒါးနေ့မို့လို့တဲ့.. အဒေါ်က တစ်ရက်နောက်ဆုတ်တယ်… နောက်ရက်အလုပ်တွေနဲ့ အချိန်တွေ ကျပ်နေလို့ နည်းနည်းစိတ်ညစ်နေတယ်.. ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဆိုရင် ဝါတွင်းလည်း ပြောင်းတာပဲ.. နဂါးခေါင်းလည်း မသိဘူး… ရက်ရာဇာ ပြဿဒါးဆို ပိုတောင်ဆိုးသေးတယ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12069
Alinsett@Maung Thura says: .အေသင်က …တင်းတယ်…တင်းတယ်… တင်းတယ်တင်းတယ်ဟေ့…လို့ ဆိုတော့…တင်းကုန်ကြရောလား… ကျနော်ကတော့ ဗေဒင်ကို သဂျီး ယုံသလိုမျိုး…
နိမိတ်ဆိုတာတွေထဲက …ကောင်းတဲ့နိမိတ်ဆို ယုံမယ်ဗျ…
မကောင်းတဲ့ နိမိတ်ဆို…မမြင်ယောင် ဆောင်ထားမယ်…
lu lu says: ကုလားနဲ့ ငါး ကိုအရုပ် ဆွဲရမယ် ဆိုတဲ့ သဘောင်စကားကို
မှန်စေချင်ပေမယ် ငါး တော့ စားချင်သေးတယ် လို့ 
ဦးဦးပါလေရာ says: .နိမိတ်ဆိုရာမှာ-
.ဗေဒင်ပညာအရ စန်းနဲ့ (အချိန်နဲ့) ယှဉ်ပြီးကောက်တာ ဆိုတာရှိတယ်။
.အဲဒါကတော့ ဗေဒင်ဆရာတွေကိစ္စမို့ သိပ်မပြောလို-
.ကျုပ်ကလဲ ကိုယ့်ကိုတွက်သမျှ မင်းသိင်္ခကလွဲရင် အကုန်မှားတာမို့ ဗေဒင်ကို သိပ်မယုံ….
.နောက်တစ်မျိုးကတော့ (လူတွေကြား အပြောများရင်းကူးစက်တဲ့) တဘောင်အပေါ်မှီပြီး နိမိတ်ကောက်တာ…
.အဲဒါကတော့ နဲနဲတော့ ဟုတ်သလိုလိုရှိတယ်…
.လူတွေရဲ့ ခံစားချက် တောင့်တချက် မျှော်လင့်ချက်တွေကတဆင့် ပုံပြောင်း ဖြစ်ပေါ်လာတာမို့လို့ပဲ…
kai says: .နောက်တစ်မျိုးကတော့ (လူတွေကြား အပြောများရင်းကူးစက်တဲ့) တဘောင်အပေါ်မှီပြီး နိမိတ်ကောက်တာ…
ဆိုတော့.. ၀ိုင်းစုရဲ့.. ခါချနေရတယ် သီချင်းကိုလူကြိုက်များလာတာက…
ဆိုတော့. ခါချနေချင်တာမို့… မသိစိတ်တွန်းအားနဲ့.. ခါချနေဖြစ်အောင်လုပ်ရော..
လုပ်ကြသမို့.. ခါချနေရတဲ့ဘ၀မရောက်သေးရင်တောင်.. အဲဒီဖက်ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်ကြတဲ့အတွက်… အဲဒါနဲ့ဆိုင်တဲ့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်းတွေတိုးတက်လာရော..
မိန်းမတွေ.. အာဏာပါဝါရှိလာမဲ့နိမိတ်လို့… ထင်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: အာ့ဆို ခု ၀ိုင်းစု “ခါချနေရတယ်” သီချင်း အတော်ပေါက်နေတယ်.. ဘာနိမိတ်တုံး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1292
uncle gyi says: ကိုနီရေမန်းလေးမှာဆိုင်ကယ်တိုက်တာကဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်
Courage says: အတိတ်တို့ နိမိတ်တို့ အယုံအကြည့်မရှိဘူးဆိုရင် ယောအတွင်းဝန် ဦဖိုးလှိုင်တို့ အယူတော်မင်္ဂလာ ဦးနိုးတို့ရဲ့ အခန်း ကဏ္ဍကို ဘယ်နားသွားထားကြမလဲ မေးကြည့်ရမှာပေါ့
lu lu says: အဲ့ဒီ ဘာသာတရား မှာ ကိုယ့်ဘာသာမဟုတ်တဲ့သူတွေကိုသတ် ခိုင်းတာရော ဘာသာတရားကလူကိုခိုင်းတာလား လူက ဘာသာတရားပေါ်လွှဲချတာလား
uncle gyi says: lulu ရေ
ဦးကြောင်ကြီး says: ရွှေတိဂုံပေါ် လင်းတငှက် နားတဲ့ နမိတ်ကတော့ ထင်ထင်ရှားရှားပါပဲ..။
Ma Ei says: အတိတ် နမိတ် ဆိုတာက သိသူဖော်စား မသိသူကျော်သွား ဆိုသလိုပါဘဲ
ယုံကြည်သူတွေ ကသာ မှတ်ယူ အသုံးပြု ဆောင်ကြ ရှောင်ကြပြီး
မယုံသူတွေ မသိသူတွေ ကတော့ ဘာမှသိ မှာမဟုတ်ပါဘူး…
ခင်ဇော် says: နမိတ်ဆိုတာ ကောက်တတ်ရင်တော့ ကောက်လို့ရနေတာချည်းး
လုပ်ချင်ရင် ဘာဖြစ်ဖြစ် မယုံဘူးးး လုပ်မှာ။
မလုပ်ချင်ရင် ရှိတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ကာမှာ။ ဟိဟိ
Mike says: .ကျုပ်ရေးဖူးသဗျ…
အနော်ရထာမင်းစောသည် လယ်တွင်းကိုးခရိုင် ဆည်၍ပြီးသောအခါ နေပြည်တော် ပုဂံသို့
ပြန်ခါနီး၌ ကွန်းထောက်နားသည့် တဲအောက်မှ ဖားမြည်သံကို ကြားလေသည်။ ထိုအခါ
ဟူးရားဖြူ၊ ဟူးရားညို တို့အား အကြောင်းကိုမေးလေ၏၊
ဖားမြည်သံကို နားလည်သော ဟူးရားဖြူ၊ ဟူးရားညို တို့က ဖားဖိုသေ၍ ဖားမ လင်ကောင်ပိုး၍
ငိုကြောင်း သံတော်ဦးတင်လေ၏။ အမိန့်တော်အရ မြေကိုတူးကြည့်ရာ ပြောဆိုသည့်အတိုင်း
ဖားမသည် ဖားဖိုကို ပိုးကာ ငိုနေသည်ကိုတွေ့ရ၏။ ထိုအချင်းအရာကို မင်းကြီးက နမိတ် မည်သို့နည်းဟု မေးမြန်းရာ…
ဟူးရားဖြူ၊ ဟူးရားညို တို့က ဤနမိတ်ကားနမိတ်ကောင်းမဟုတ်
အရှင်မင်းကြီးသည် ဘ၀ဟောင်းမှ ကောင်းမှုများ ကုန်ပြီ ဖြစ်သဖြင့် ပုဂံနေပြည်တော်သို့
မ၀င်မီ နတ်ရွာစံမည့် နမိတ်ဟု ဟော၏။
ထိုဟောချက်နမိတ်အတိုင်း အနော်ရထာမင်းသည် ကိုးခရိုင် နယ်စပ်တွင် ကျွဲရိုင်းခတ်၍
နတ်ရွာစံလေသည်။(မြန်မာ အများစုသည် အတိတ်နမိတ် များကို သတိပြုလေ့ရှိ၏၊ ဤ
သည်ကို ခေတ်နောက်ကျသည်ဟု ယူဆပါကလည်း ယူဆနိုင်ပါ၏၊ ဤ ကား လူ
တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီ၏ ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်မှု လူ့အခွင့်အရေးပင် မဟုတ်ပေလား..) http://mandalaygazette.com/204176 Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1292
uncle gyi says: ဘာပြောပြောပေါ့လေ